Xulka Kubadda Cagta Brazil - BBC News Somali
Xulka Kubadda Cagta Brazil
7 Juunyo 2010
Image caption Xulka Qaranka Brazil, oo ka mid ah dalalka ugu qaadista badan koobka adduunka.
Xulka kubadda Cagta ee Brazil waa dalka qaatay koobabka ugu badan ee tartanka ciyaaraha adduunka tan iyo markii uu bilowday. Guddiga maamula ciyaaraha dalkaas, waxaa la aasaasey sannadkii 1914kii, waxaa-na uu ku biiray guddiga caalamiga ah ee maamulka kubadda cagta adduunka sanadkii 1923kii.
Qarnigii 20-aad, ayaa FIFA ay Brazil u aqoonsatay xulka ugu ciyaarta wanaagsanaa caalamka. Tababaraha haatan hogaaminaya waa DUNGA, wuxuuna uu la wareegay xilkaasi kadib markii tababare Carlos Alberto Barera oo iska casilay xilka tababarenimada.
Ciyaartii ugu horreysay heer qaran ah, Brazil waxaa ay la ciyaartey xulka dalka Argentina, 3---0 na waxaa ku badisey Argentina. Guushii ugu ballaarnayd waxaa ay soo martey sannadkii 1975kii, oo Brazil xulka kubadda cagta ee Nicaragua ay uga badisey 14-0.
Edison Arantes do Nascimento, ayaa lagu tilmaamaa, ciyaaryahankii ugu caansanaa ee soo mara xulka qaranka kubadda cagta Brazil, halka ciyaaryahan Cafu uu isna yahay ciyaariyahankii ugu badnaa xagga ka qeybgalka ee xulka Brazil dhinaca ciyaaraha heerka qaran, wuxuuna u ciyaaray xulka dalkiisa 142 ciyaarood oo heer qaran ah.
Xulka Barazil ,waa xulka marna aan ka harin u soo bixidda wareegyada kama dambeysta ee tartanka koobka k/cagta ee aduunka, tan iyo intii la billaabay tartanka sannadkii 1930kii, 5 jeer ayayna ku guuleysteen koobka k/cagta ee aduunka 1958kii, 1962kii, 1970kii, 1994kii iyo 2002dii. Hase yeeshee, Barazil waa xulka illaa iyo haatan marna koob aan ku qaadin dalkooda gudihiisa.
Ciyaaryahanka Ronaldo waxaa lagu tilmaamaa, gool dhaliyiha keliya ee soo maray koobka adduunka 15 gool dhaliyay saddex tartan oo caalami ah 1998dii, 2002dii iyo 2006dii, 4 gool, 8 gool iyo 3 gool sida ay u kala horreeyaan.
Xulka Barazil waxaa uu koobka koofurta mareykankana qaaday 8 jeer, Garoonka wayn ee sida badan ay ku ciyaaraan waa Marakana Stadium.
Xiddigihii ugu caansanaa ee soo maray waxaa ka mid ah: Lionyas, Pele, Di-dii, Faafa, Giarozina, Mario Zagalo, Tostaw, Garaneshia, Ziko, Rivalino, Socrat, Romario, Bapetto, Ronaldo, Revaldo, Roperto Carlos, Ronaldino, Kaka, Ropinhoiyo qaar kale oo haatan waddada ku soo Jira.